Aircalin dia mandray ny fiaramanidina Airbus A330neo voalohany
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Aircalin dia mandray ny fiaramanidina Airbus A330neo voalohany
New Caledonia's Aircalin efa nandray ny voalohany amin'ny roa Airbus A330-900 tamin'ny lanonam-panaterana tao Toulouse, France, niaraka tamin'ny fiaramanidina faharoa nanatevin-daharana ny fiaramanidina taty aoriana tamin'ny taona 2019, nanolo ireo A330 roa misy azy. Aircalin dia mpanjifa ho an'ny A320neo ihany koa ary hanolo ireo A320 roa misy azy ho lasa mpandraharaha A330-900 roa sy A320neos roa.
Ny A330neos an'i Aircalin dia namboarina tamina lamina kilasy telo ahazoana aina miaraka amin'ny seza 291 na seza 25 bebe kokoa noho ireo A330-200 kely misy azy. Anisan'izany ny fandraharahana 26, toekarena 244 ary ny toekarena voalohany voalohany misy seza 21.
Ny A330neos dia hampiroborobo ny fahafaha-manao sy ny fifandraisana tsy miato eo amin'ny faritry ny Nosy Pasifika frantsay sy ny tsena any Japon, Aostralia ary ireo nosy Pasifika, manapaka ny fandoroana solika 25% isaky ny seza (raha ampitahaina amin'ireo mpifaninana tamin'ny teo aloha) sy manome ny mpandeha ny fenitra farany amin'ny fampiononana. Ireo zotra ireo dia manome rohy ilaina amin'ny fizahan-tany ary koa ny fifamoivoizana amin'ny asa aman-draharaha izay tena ilaina amin'ny toekaren'i New Caledonia.
Ny A330neo no tena fiaramanidina fiaramanidina vaovao mifangaro amin'ny haben'ny A330 XWB vatana malaza indrindra ary mampiasa teknolojia A350 XWB. Powered by ny maotera farany Rolls-Royce Trent 7000, ny A330neo dia manome ambaratongam-pahombiazana mbola tsy nisy toy izany - miaraka amin'ny fandoroana solika 25% ambany isaky ny seza noho ireo mpifaninana teo aloha. Miaraka amin'ny tranoben'ny Airbus Airspace, ny A330neo dia manolotra traikefa mpandeha tokana miaraka amin'ny habaka manokana sy ny rafitra fialamboly amin'ny sidina farany sy fifandraisana.
Air France-KLM hividy fiaramanidina Airbus A60 220
Bartlett dia nanendry talen'ny fiarovana sy ny traikefa an'ny mpitsidika handinika bebe kokoa ny tatitra momba ny fiarovana